thinzar's blog: Wish me happy birthday
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ သဉ္ဖာ
10/4/07 9:08 AM
(((((ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ မသဉ္စာ..)))))
အပူပင်ကင်းကင်းနဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပြီး အနှစ်တရာ့နှစ်ဆယ် မွေးနေ့ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်..
ဧပြီ ၁ဝ ရက် ဘုရားသွားတယ်.. အတူတူတွေဂိုုး.. :)
ကိုမျိုးကျော်ထွန်း>> ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်။ တကယ်wish လုပ်သွားပေးတဲ့ အတွက်။ :D
ကိုတက်စလာ>> ကျေးဇူးနော်။ အနှစ် တစ်ရာ့နှစ်ဆယ်မွေးနေ့ ကြရင်လည်း အခုလိုဘဲ လာwish လုပ်နိုင်ပါစေလို့။ 
(((ဘလော့ဂ်ရေးတော့လည်း …. ရေးပြန်ပြီ။။။ စီဘောက်စ် ထည့်တော့လည်း …. ထည့်ပြန်ပြီ။။။ ဟာ.. အားလုံးကို ရှုပ်နေတာဘဲ)))
~ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ စိုင်းစိုင်းကို သတိရသွားလို့ပါ။ :P
11/4/07 10:26 AM
Happy Birthday ပါဗျာ နဲနဲနောက်ကျသွားတယ် ဆောတီး :)
ဪ.. ရပါတယ်.. wish ဝင်လုပ်တာတောင် ကျေးဇူးတင်နေတာ။ ရှဲ့ရှဲ့။ :D
12/4/07 1:13 PM
အင်း…April born တွေနဲ့ တွေရကြုံရတာ ပျော်စရာပဲဗျာ။ ကိုယ်တိုင်လဲ မနေ့ကမှ Caferမှာ cappuccinoနဲ့ chocolate cakeလေးနဲ့ celebrate လုပ်လိုက်ရတာ။ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ ခင်ဗျာ။ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ ခင်ဗျာ။ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ ခင်ဗျာ။
12/4/07 3:30 PM
မနေနေနိုင် >> တကယ် thanksalot နော်!! :)
ကိုနတ္ထိ>> ဟာ ကိုနတ္ထိလဲ april born လား။ ဒါကြောင့်နေမယ်.. ခင်ဖို့ကောင်းတာ။ :D
12/4/07 5:51 PM
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ မသဉ္ဃာ၊ အသက်တနှစ်ကြီးလာတိုင်း ကြီးလာတိုင်း ဘဝကို ရောင့်ရဲမှုများနဲပ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ၊ ပြီးတော့ သောကများနဲ့ ကင်းဝေးပါစေ။
April 10 ရက်မွေးသူများ..
အဲဒီနေ့ မွေးတဲ့သူတွေဟာ အပေါင်းအသင်းခင်တတ်တယ်..
ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်..
ပတ်ဝန်းကျင်အပေါင်းအသင်းကြားမှာ အောင်မြင်တတ်သလို အမြင်ကတ်ခြင်းလည်း ခံရတတ်တယ်...
အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီနှစ်မှာ စကားများရတတ်တယ်...
ပညာရေးမှာ ဒီနှစ် သတိထားပါ...
ဒီနှစ်အတွင်း ပညာရေးတွင် အရမ်းကြိုးစားပါက အလွန်အောင်မြင်နိုင်တယ်..
ပုံမှန် အတိုင်းဆိုလျှင် ပိုဆိုးရကိန်းရှိတယ်..
12/4/07 10:14 PM
ဒီဘလော့ခ်ကို မရောက်ဖြစ်တာ နှစ်ရက်လောက် ရှိသွားတော့ မွေးနေ့ပို့စ်တင်ထားတာ မတွေ့မိဘူး။ ဘယ်နှစ်နှစ်မြောက်လဲ ဆိုတာ တမင်မရေးထားတော့ မမေးတော့ပါဘူး။ (အဲဒီ မေးခွန်းက ခေါင်းရိုက်ခံရတတ်တယ်ဆိုလား :D)
နောက်တော့ ကျနေလောက်ပြီ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်လဲ ဆုတောင်းပါတယ်။
ဘယ်နှစ်နှစ်မြောက်မှန်း မသိတဲ့ မွေးနေ့မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်း သုခနဲ့ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ၊ ရည်မှန်းထားသည်များကို အခက်အခဲမရှိ အောင်မြင်ပါစေ။
ညလေး>> ဆုတောင်းလေးက အရမ်းကောင်းတယ်။ ကျေးဇူးနော်။
saturngod >> ဟိုက်ရှ်… အလာကြီးဘဲ။ စံဇာဏီဘို ထိုင်ငိုသွားဦးမယ်နော်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးလောက်နီးနီး မှန်နေတယ်။ တော်ပါ့တော်။ ဘယ်လိုတွက်လိုက်တယ်မသိ။
လူအမြင်ကတ်ခြင်း ခံရမယ်ဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ လုပ်ချင်တာ လုပ်ပေါင်းများပြီ။
အချစ်ရေးထက် ငွေရေးကြေးရေးဘဲ ဦးစားပေးလိုက်တော့မယ်။ စကားမများချင်ဘူးလေ။ :D ပညာရေးကတော့ မှန်တယ်ဗျို့။ ဒီနှစ် ဖိုင်နယ်ဆိုတော့ မကြိုးစားရင် သေနိုင်တယ်။ အရမ်းကြိုးတွေစားရင်လည်း ဆေးရုံရောက်နိုင်သည် လို့ ထည့်မဟောဘူးလား။
အခုလို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဘလော့ဂ်တိုင်ရာရောက် ဟောကြားပေးတဲ့ အတွက် ငါ့မောင် အကြွေးတွေနဲ့ ကင်းဝေးနိုင်ပါစေသော်ဝ်။
ကိုကလိုစေးထူး >> ဟဲဟဲ.. အိတ်စ်ပီးရီးယန့်စ် ရှိဖူးတယ်ထင်တယ်။ (အသက်ဘယ်လောက်လဲ လို့မေးလို့လေ။ :P)
wish ပေးတာ သင့်ခ်ယူနော်။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့ပါ မသဉ္စာ..
(၁ဝရက်တိတိ နောက်ကျသွားတယ်၊ တော်သေးလို့ မရောက်ခင် တရက်က ပြောခဲ့ဘူးတာ)
20/4/07 7:18 PM
စာမေးပွဲ ဖြေနေတယ်ဆိုတော့လည်း ၁ဝ ရက် နောက်ကျတာ ထားလိုက်ပါတော့။ မဟုတ်ရင် နောက်ကျတဲ့ အတွက် မုန့်ဝယ်ကျွေးခိုင်းမလို့်။ =)
21/4/07 12:44 AM